Saddex qof oo xalay siyaabo kala duwan loogu dilay Boosaaso & bilesyka oo baaritaanno wada. – Radio Daljir
Febraayo 17, 2010 12:00 b 0
Bosaso, Feb 18 ? Illaa saddex qof ayaa habeennimadii xalay ahayd siyaabo kala duwan loogu kala dilay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacab ah oo xilliga la toogtayna ku guda jiray hawlahoodii shaqo ee caadiga ahaa.
3-da qof ee xalay lagu dilay magaalada Boosaaso labo ka mid ah waxaa lagu toogtay hal goob oo ah meherad shaaha lagu cabbo sida ay soo sheegeen wariyaasha idaacadda Daljir ee magaalada Boosaaso, halka qofka kalana uu ahaa wiil dhallinyaro ah oo isna lagu dilay bartamaha magaalada fiidkii hore ee xalay.
Dadkii gaystay dilalkii xalay ayaa dhammaantood baxsaday, lamana garanayo illaa iyo haatan sababta dilalkaasi ka danbaysay, waxaana saraakiisha ciidanka amniga ee magaalada Boosaaso ay sheegeen in ku raad joogaan raggii dilkaasi ka danbeeyey.
Wixii ka danbeeyey xilligii xalay ay dilalkaasi dhaceen illaa saaka magaalada Boosaaso waxaa ka socda hawlgallo amni sugid ah oo ay wadaan ciidanka ammaanka ee magaalada Boosaaso kuwaasi oo lagu baarayo falal danbiyeedkii dhacay iyo ciddii ka danbaysay.
Falalka noocaan ah ayaa muddooyinkaan danbe ku soo kordhayey magaalada Boosaaso waxaana habeen hore magaaladaasi lagu dilay wiil iyo gabar dhallinyaro ah oo sida la sheegay isku meel ku sugnaa xilligii la toogtay, waxaana ka sii horreeyey falal kale oo mas?uuliyiin dawladda ka tirsan iyo dad shacab ahba lagu dilay.
Mas?uuliyiinta dawladda ee gobolka Bari ayaa dhawr jeer ku celceliyey in ammaankka wax ka qaban doonaan, kana hortagayaa dhicitaanka falalka amni darro, hase ahaatee wali xal rasmi ah looma helin xakamaynta arrintaasi.
Amiir Maxamuud Yusuf Ciise oo ka mid ah Issimada Puntland oo si diiran loogu soo dhaweeyey Minneapolis, Minnesota.